Daawo: Caro weyn oo ka dhalatey go’aankii Donald Trump ee Qudus (VIDEO). – Shacabka News
Daawo: Caro weyn oo ka dhalatey go’aankii Donald Trump ee Qudus (VIDEO).
Caro aad u xooggan ayaa ka dhalatey go’aankii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu habeenkii xalay ku dhawaaqey ee uu sheegay in magaalada barakaysan ee Qudus ay tahay caasimadda dowladda Israel.
War ka soo baxay Boqortooyada Sucuudiga ayaa go’aankaas ugu yeertay ‘mid masuuliyad darro ah’.
Dowaldda Turkiga iyo Jaamacada Carabta ayaa ku baaqey shir deg-deg ah oo looga arinsanayo go’aanka Donald Trump uu ku aqoonsadey Qudus in ay tahay caasimadda Israel.
Madaxweynaha Dowladda Falastiin Maxmuud Cabbaas ayaa sheegay in ay meesha ka baxdey wixii loogu yeeri jirey geeddi socodka nabadda ee Maraykanku ka dhex wadey falastiin iyo Israel, Cabbaas ayaa sheegay in Qudus ay tahay caasimadda Dowaldda falastiin wax gorgortan ahna aan laga geli karin, xaaladda ay hadda ku jirtaana ay tahay magaalo ay Israel qabsatey.
Dadka ka faalooda arrimaha Maraykanka ayaa sheegaya in Trump aqoonsado Qudus in ay tahay caasimadda Israel ay tahay mid la xiriirta siyaasadda gudaha ee Maraykanka.
Donald Trump ayaa noqdey Madaxweynihii ugu shacbiyadda yaraa ee Maraykanka soo mara sanadkii u horeysey ee xukunkiisa, waxaana hareeyey fadeexadda xiriirka Ruushka iyo saraakiishii ololihiisa doorashada, taas oo todobaadkii u danbeeyey saxaafadda Maraykanku si weyn uga hadleysey, kadib markii mid kamid ah la-taliyaashii Trump uu qirtey in uu yahay denbiile.
Trump ayaa ololihiisa doorashada ku ballan qaadey in safaaradda Maraykanka uu geyn doono Qudus, horey uma dhicin in Madaxweyne Maraykan ah uu ku dhiirado arrintan oo kale, waana qorshe uu ku raali gelinaayo dadka Yuhuuda, iskuna tilmaamayo in uu yahay nin fulin kara waxaan horey loo fulin waayay.
Author Mohamed YarePosted on 07/12/2017 Categories VIDEO, WARARKA CALAMKA
Previous Previous post: DAAWO MUUQAALKA: Heshiiskii Galmudug Iyo Ahlusuna ee Villa Soomaaliya Iyo Sheikh Shaakir oo Helay Awood Buuxda
Next Next post: Puntland oo soo Dhawaysay Heshiiska Galmudug iyo Ahlu-Sunna.